Madaxweyne Muuse Biixi Oo Kulan Gaar Ah La Qaatay Guddoomiyeyaasha Xisbiyada Mucaaradka Iyo Nuxurka Qodobbo La Isla Meel-Dhigay | Himilo Media Group
Hargeysa, (Himilo)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta kulan gaar ah xafiiskiisa kula qaatay Guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarid ee WADDANI iyo UCID, Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Eng. Faysal Cali Waraabe.
Kulankan oo ah kii saddexaad ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Md Muuse Biixi Cabdi la yeesho hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, ayaa ahaa mid wada-tashi iyo is xog-wareysi ah oo madaxweynaha iyo madaxda labada xisbi mucaarid diiradda ku saareen arrimo door ah oo salka ku haya danta guud ee qaranka.
Kulanka uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la qaatay hoggaamiyayaasha xisbiyada mucaaridka ah ee WADDANI iyo Ucid Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Eng. Faysal Cali-waraabe, ayaa sidoo kale la iskula meel-dhigay in wada-jir iyo isku-duubni lagu wajaho bogsiinta dhammaanba wixii xanaf iyo xagtimo ah ee ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee dalka ka qabsoontay dhammaadka sanadkii tegay ee 2017-ka.